မို့ မို့ ထွန်း – Grab Love Story
နေ့စဉ်ဆိုသလို ဦးတင်ဝင်းနဲ့ ကျော်ကျော်ဝင်းတို့ အရက်ဝိုင်း ဖြစ်ခဲ့၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ အရေးကြီး၍ ကျော်ကျော်ဝင်း အိမ်ပြန်ညဉ့်နက်သောနေ့များမှလွဲ၍ သူတို့နှစ်ဦး ဆုံ၍ အရက်သောက်ဖြစ်ကြသည်။ မို့မို့ထွန်းကလည်း ညစဉ်ဆိုသလို ဦးတင်ဝင်း၏ အခန်းဘက်သို့ တီဗီ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရန် သွားရင်း ဦးတင်ဝင်း၏ အလိုးကို ညစဉ်အလိုးခံ၏။ ဦးတင်ဝင်းထံ မသြားမီ ညားကာစ ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်း လိုးသည်ကိုလည်း အလိုးခံခဲ့သေးသည်။ ညစဉ်ညတိုင်း ယောက်ျားနှစ်ယောက် အလိုးကိုခံ၍ မို့မို့ထွန်းသည် ကာမစည်းစိမ် ခံစားနေသည်မှာ (၁၀) ရက်ခန့်ပင် ရှိပြီဖြစ်သည်။
သူတို့နှစ်ဦး အရက်ဝိုင်းပြီးလျှင် ညစာစားရန် အတွက် ကာမအားကိုဖြစ်စေမည့် ဟင်းများ၊ ဓါတ္စာမ်ား၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်အောင် စီမံချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးရသည်မှာ မို့မို့ထွန်းတစ်ယောက် မမောနိုင်မပန်းနိုင်းဖြင့် ကြည်နူးနေသည်။ လီးကြီး၍ အလိုးကောင်းပြီး အထာကျွမ်းကာ ဗလကောင်းသည့် ဦးတင်ဝင်းကို မိမိ၏ ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်းထက် ပိုမို စွဲလမ်းမြတ်နိုးမိ၏။ ခ်စ္မိ၏။ မနက်အိပ်ရာမှ ထလျှင် ရေမိုးချိုး ပြင်ဆင်ပြီး ချစ်လင်ဖြစ်သူနှင့် အပြင်သွားကာ မုန့်စား၏။ လက်ဘက်ရည်သောက်ကြ၏။ ပြီးလျှင် ချစ်လင်ဖြစ်သူ ကျော်ကျော်ဝင်းမှာ ကားပွဲစားတန်းသို့ တစ်ခါတည်း တန်းသွား၏။
မို့မို့ထွန်းမှာ ဈေးသို့ တစ်ပါတည်း ဆက်သြားကာ ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်၍ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၏။ နံနက္စာကို ကျော်ကျော်ဝင်းက ပြန်မစားပါ။ အပြင်တွင်သာ ကြုံသလို စား၏။ ညေနျပန္လာမွသာ အိမ်တွင် ညေနစာ စားသည်။ ဒီနေ့လည်း မို့မို့ထွန်းတစ်ယောက် ဈေးမှပြန်လာပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၏။ ပြီးတော့ ရေတစ်ခါ ထပ်ချိုးကာ အလှပြင်ပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ထိုင်၍ ကက်ဆက်နားထောင်ကာ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ဖတ်နေသည်။ မည်မျှကြာသွားသည် မသိ။ ဗိုက်ဆာလာ၍ နာရီကြည့်လိုက်မှ နေ့လည် (၁၂) နာရီ ရှိပြီ ဖြစ်၍ နံနက္စာ ထည့်ကာ စားလိုက်သည်။
တစ်ဖက်ခန်းမှ ဦးတင်ဝင်းကတော့ ရုံးသွားနေပြီ ဖြစ်၏။ နံနက္စာ ထမင်းစားပြီးနောက် ခေတ္တ ခဏ ထိုင်နေပြီး မျက်လုံးစင်းလာသဖြင့် အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ခေါင်းအုံးဝင်ယူကာ အိမ်ရှေ့တွင် ဖျာလေးခင်းပြီး လဲလျောင်းကာ အိပ်လိုက်၏။ အိမ်ရှေ့မှ တစ်စုံတစ်ယောက်က မိမိ၏ အမည်ကို ခေါ်သံကြားမှ နိုးလာကာ လူးလဲထထိုင်လိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့သို့ ကြည့်လိုက်ရာ မိမိယောက်ျား၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ၊ မိမိယောက်ျားနှင့် စပ္တူ ကားဝယ်ရောင်းလုပ်နေသည့် ကိုဇော်မင်းဆိုသူကို တွေ့ရ၍ တံခါးဖွင့်ပေးရန် ကပ်ာကယာ ထ၍ ထမီကို ဖြန့်ဝတ်လိုက်သည်။ အလျင်စလို ဝတ်လိုက်မှုကြောင့် သူမ၏ ဗိုက်သား ဝင်းဝင်းလေးမှာ စောက်ဖုတ်အပေါ်နား ဆီးစပ်ရှိ စောက်မွှေးနက်နက်လေးများအထိ ပေါ်သွားသည်ကို သတိမထားမိလိုက်ပါ။
ထို့ပြင် ရင်စေ့ ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေး၏ အပေါ်နှိပ်ကျယ်သီးလေးပြုတ်ကာ ရင်သားနှစ်မွှာ၏ အပေါ်ပိုင်းများမှာ ဝင်းစက်စွာ ပေါ်နေသည်ကိုလည်း သတိမပြုမိဘဲ တံခါးသို့ အလျင်အမြန်သွား၍ သံဇကာတံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ အစ်ကိုကြီး ဘယ္က လှည့်လာတာလဲ. ငါ ..ဟိုဖက္နား ကားလာကြည့်ရင်းနဲ့ လှည့်ဝင်လာတာ၊ နင့်ယောက်ျားတော့ ငါ အင်းစိန်ဘက် လွှတ်လိုက်တယ်၊ အပြန်မိုးချုပ်လိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ် ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး၊ ကော်ဖီသောက်ဦးလေ၊ ဖျော်လိုက်မယ် ကော်ဖီ မလုပ်နဲ့ဟာ၊ သံပုရာရည် ရှိရင် လုပ်ပေးပါဟာ ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကြီး မို့မို့ထွန်းသည် ပျာယာခတ်နေ၏။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုဇော်မင်းသည် သူမ၏ ယောက်ျားကို ကားပွဲစားလောကထဲ ခေါ်၍ ဝင်ငွေကောင်းပြီး အလုပ်ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ပြပေး၏။ ပြီးတော့ သူနှင့် လည်း အတူတွဲဖက်၍ ပွဲစားလုပ်စေ၏။ သူမတို့ လိုသလောက်ငွေကိုလည်း အချိန်မရွေး ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည့်အချက်ကတော့ မို့မို့ထွန်းသည် ကျော်ကျော်ဝင်းနှင့် မယူမီက ရည်းစားတစ်ယောက် ထားခဲ့ဘူးသည်။ မို့မို့ထွန်း၏ ကြောက်လန့်၍ လက်သင့်မခံ ငြင်းပယ်မှုကြောင့် ဘာမွေတာ့မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် တည်းခိုခန်းသို့ အသွားအပြန် တက္ကစီငှားခဲ့ရာ ယင်းတက္ကစီကားကို ထိုစဉ်က မောင်းသူမှာ ကိုဇော်မင်းဖြစ်၏။
မို့မို့ထွန်းမှာ ကိုဇော်မင်းကို မမှတ်မိ။ ကိုဇော်မင်းက သူမ ကျော်ကျော်ဝင်းနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လခန့်အကြာကမှ မူးမူးနှင့် ပြန်ပြောပြ၍ ကိုဇော်မင်းမှန်း သိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်ချင်း ပြောရ၍ တော်သေး၏။ နင့်ယောက်ျားကို ငါ မပြောပါဘူး ဟုတော့ ကိုဇော်မင်းက ပြောခဲ့၍ တော်သေး၏။ အိမ်အတွင်းမှာ သံပုရာရည်ခွက်လေးကို ကိုင်၍ မို့မို့ထွန်း ပြန်ထွက်လာ၏။ သူမ၏ အဝတ်အစားများကို သေသပ်စွာ ပြန်၍ ပြင်ဆင်ပြီး ဝတ်လာခဲ့သည်။ အစ်ကိုကြီး သံပုရာရည်လေး သောက်လိုက်ဦး အေး..အေး ကျေးဇူးပဲဟာ. သံပုရာရည်ခွက်လေးကို စားပွဲပေါ်သို့ တင်ပေးပြီး ကိုဇော်မင်း၏ ဘေးရှိ ကော်ကုလားထိုင်တွင် မို့မို့ထွန်းသည် ဝင်၍ထိုင်လိုက်၏။
ကိုဇော်မင်းထံမှ အရက်နံ့ရလိုက်၏။ ကိုဇော်မင်းမှာ အသက် (၃၀)ခန့်ရှိပြီး အသားညိုညိုနှင့် ကုလားဆင်ဖြစ်ပြီး အရပ်မှာ (၅)ပေ (၆) လက်မလောက်ရှိသည်။ ကိုယ္လုံးမွာ တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပေါက်မှာ ပြေပြစ်၏။ လူရည်သန့်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။ ကိုဇော်မင်းသည် သံပုရာရည်ခွက်ကို ကောက်ကိုင်၍ တကျိုက်သောက်လိုက်၏။ သူ၏အနီးတွင် ထိုင်နေသော မို့မို့ထွန်းထံသို့လည်း သူ၏အကြည့်က ရောက်နေသည်။ မို့မို့ထွန်းသည် ပန်းရောင်ခံပေါ်တွင် အဖြူပွင့်သေးသေးလေးများပါသော ထမီတစ်ပတ်နွမ်းလေးကို ဝတ္ထား၏။
လုံချည်လေး၏ ပါးလွှာမှုကြောင့် သူမ၏ ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီးများနှင့် ကားအယ်သော တင်သားကြီးများမှာ တင်းပြောင်အိစက်နေသည်ကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ အပေါ်တွင် ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ရင်စေ့ဘလောက်စ်လက်ပြတ်လေးကို ဝတ်ထားသည်။ အိမ်နေရင်းဖြစ်၍ ဘာမွ အခုအခံ ပါပုံမရေခ်။ သူမ၏ လုံးဝန်းသော ရင်သားနှစ်မွှာမှာ သိသိသာသာလေး ရှိနေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးများမှာလည်း အင်္ကျီအပေါ်မှ ကြည့်သည်ပင် အရာလေးပေးလျှက် သိသာထင်ရှားလှ၏။
ဆံပင်ကို နောက်တွင် တစ်ပတ်လျှိုလေး ထုံးထားပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တော့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးမှာ ချွေးစိုစိုကြောင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာ ပါးပါးလေး ရှိနေသည်။ အိမ်နေရင်း အဝတ်အစားလေးများဖြင့် ကပိုကယိုလေး လွေနေသာ မို့မို့ထွန်းအား ကိုဇော်မင်းက စူးစိုက်၍ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည်ကို မို့မို့ထွန်းက မသိဟန်ဆောင်၍ ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ထိုင်နေသည်။ စောစောက ကိုဇော်မင်း အိမ်ရှေ့ရောက်လာတော့ မို့မို့ထွန်းမှာ အိမ်ရှေ့ဘက်သို့ ကျောပေးပြီး တစောင်းလေးအိပ်နေသည်။
သူမ၏ လုံးဝန်းကားအယ်နေသော တင်သားကြီးမှာ အားရဖွယ် တွေ့မြင်ရပြီး အောက်ဘက်ပိုင်းရှိ ထမီစေလးမွာ သူမ၏ ထောင်အိပ်နေသော အောက်ဘက်ခြေထောက်ပေါ်တွင် ပေါင်လယ်လောက်ထိ လိပ်တက်နေပြီး ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းများ နှင့် ပေါင်သားဖြူဖြူအိအိများမှာ မြင်ရသူ ကိုဇော်မင်း၏ ကာမစိတ်များကို စိန်ခေါ်နေသယောင် ဖြစ်နေ၏။ တံခါးဝသို့ အပြေးလေးလာ၍ တံခါးဖွင့်ပေးရာတွင်လည်း သူမ၏ အင်္ကျီအပေါ်နှိပ်စေ့လေးမှာ ပြုတ်လျက် လည်ဟိုက်ဘလောက်စ်အတွင်းမှ ရင်သားနှစ်မွှာမှာ နုဖတ်ဝင်းဝါလျှက် တစ်ဝက်တပျက် ထွက်ပေါ်နေပြီး မြင်ရသူ ကိုဇော်မင်း တပ်မက်စိတ်များ တဖြားဖြား ပေါ်လာခဲ့ရသည်။
သံပုရာရည် ဖျော်ရန် အိမ်နောက်သို့ ဝင်သွားရာ တွင် သူမ၏ တင်ပါးကြီးများမှာ လှုပ်ရမ်း တုံခါလျက် ရှိပြီး သူမ၏ နောက်ပိုင်းအလှကို အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် ကြည့်နေမိသော ကိုဇော်မင်းတစ်ယောက် ကာမစိတ်များ ထကြွလာခဲ့သည်။ ယခုလည်း မို့မို့ထွန်း၏ ကပိုက၇ို အလွကို အနီးကပ်ကြည့်ကာ ကိုဇော်မင်းမှာ ကာမစိတ်များ တဟုန္ထိုး ထကြွလာရတော့သည်။ သူမအား ကိုဇော်မင်းက တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေသည်ကို မို့မို့ထွန်းက သိရှိတွေ့မြင်ရလျှက် မိမိကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြီး ကြည့်နေသူ တစိမ်းယောက်ျား၏ ရှေ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက် အတန်ကြာ ထိုင်နေရသဖြင့် သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် အမျိုးအမည်မသိသော ခံစားမှုတစ်ခုက ရင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာ၏။
ထိုခံစားမှုကဘဲ စေ့ဆော်၍လား မသိ။ မို့မို့ထွန်းသည် မသိမသာ မျက်လုံးလေး ထောင့်ကပ်၍ ကိုဇော်မင်းထံ ကြည့်မိလိုက်၏။ မို့မို့ထွန်းက သူမ၏ အကြည့်ကို အသာလေးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းကာ မျက်လွှာလေးပြန်ချ၍ ထားလိုက်မှုအား ကိုဇော်မင်းက သတိထားလိုက်မိသည်။ တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်က မိမိကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်လျှက် ကာမထကြွှနေသည်ကို သိရှိတွေ့မြင်လိုက်ရသော မို့မို့ထွန်းသည် စောစောက သူမ၏ ရင်တွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရသော အမျိုးအမည်မသိ ခံစားမှုမှသည်သူမ၏ ကာမစိတ်များ ထကြွမှုသို့ ပြောင်းလဲ ခံစားလာရလေသည်။
သူမ၏ ကာမစိတ်တို့သည် သူမအပျိုဘဝက ယခုလောက် မရှိခဲ့ပေ။ ယခုအခါ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ သူမ၏ ကာမစိတ်ဆန္ဒတို့မှာ ထကြွလွယ်လာသည်။ ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်သည့် ယောက်ျားများကို တပ်မက်စိတ်သည်လည်း အပျိုဘဝကထက် ပိုမိုလာခဲ့လေသည်။ ကာမမှုကို ကောင်းမှန်းသိလာ၍လည်း ဖြစ်နိုင်၏ ။ နောက်ပြီး ထန်းနို့ကို လှီးဖြတ်လိုက်သကဲ့သို့ ထန်းနို့များ တစိမ့်စိမ့်ဆက်၍ ထွက်နေသလို သူမ၏ ကာမသိုက္ကို အဖွင့်ခံခဲ့ရပြီး ကာမစိတ်များ တစိမ့်စိမ့် ထွက်ပေါ်လာနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ယခုလည်း မိမိကို စူးစိုက်၍ ကာမစိတ်ဖြင့် ကြည့်နေပြီး ရာဂမ်ား ထကြွနေသည်ကို သူမသိလိုက်ရတော့ သူမ၏ စိတ်မှာ ကာမေဇာမ်ား ထက်သန်ထကြွလာခဲ့ရသည်။
ကိုဇော်မင်းက သူမထံ ကြည့်နေသော အကြည့်ကို လွှဲဖယ်မသွားဘဲ လက်ကျန် သံပုရာရည်ကို ကုန်စင်အောင် သောက်လိုက်၍ သံပုရာရည်ခွက်ကို စားပွဲသို့ ပြန်ချလိုက်၏။ အော် ဟိုအစ်ကိုကြီးကို သောက်ရေ ခပ်ပေးအုံးမယ် ခဏလေးနော် သူမသည် ပြောပြောဆိုဆို အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ဝင်သွား၏။ ကိုဇော်မင်းက သူမ၏ နောက်ဖက်ကို ကြည့်နေမည်ကို သိ၍ သူမ၏ တင်သားကြီးများကို ပို၍ လှုပ်ခါရမ်းကာ လျှောက်လှမ်း၍ အိမ်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ အိမ်ထဲမှ သောက်ရေခပ်၍ ပြန်ထွက်လာသော မို့မို့ထွန်းက ကိုဇော်မင်းကို အိမ်ရှေ့ခန်း မေ၇ာက်မှီလေးတွင် တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇော်မင်း၏ အကြည့်တွေက သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးရှိရာ ပေါင်ခွဆုံနေရာသို့ စူးစူးစိုက်စိုက်ကြီး ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ သူမရင်ထဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွား၏။
ကိုဇော်မင်းက သူထိုင်နေရာသို့ မို့မို့ထွန်း မရောက်မှီလေးတွင် စကားဆိုလာ၏။ ဟို ညည်းအရင် အမျိုးသား ကောင်လေးတောင် မနေ့က တွေ့လိုက်သေးတယ် ဟာအစ်ကိုကြီးကလည်း ဘာတွေပြောမှန်းလဲ မသိဘူး မို့မို့ထွန်းက ကိုဇော်မင်းကို မခို့တရို့လေး ကြည့်လျှက် ညုတုတုလေး ပြောလိုက်၏။ ပြီးတော့ သောက်ရေဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ်သို့ တင်လိုက်၏။ ရေတစ်စက်နှစ်စက်က ကိုဇော်မင်း၏ ပေါင်ပေါ်သို့ က်သြားရာ မို့မို့ထွန်းက သောက်ရေဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ် အမြန်တင်လျက် သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် ရေစက်ကျသွားသော ကိုဇော်မင်း၏ ပေါင်ပေါ်သို့ ထိထိမိမိလေး ဖိလျက် ပွတ်လိုက်၏။
ဟောတော့ .. အစ်ကိုကြီး လုံချည်တွေ စိုသွားပြီ ပြောလည်းပြော လက်ကလေးဖြင့်လည်း ပေါင်ပေါ်သို့ ပွတ်ပေးနေရာ ထောင်မတ်နေသော ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးကို မိမိရရ နှစ်ချက်သုံးချက်ခန့် သူမ၏ လက်ခုံကလေးများဖြင့် ထိမိလိုက်၏။ သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် ကာမစိတ်များ နိုးကြားထက်သန်လာနေပြီ ဖြစ်၏။ မို့မို့ထွန်းသည် ကိုဇော်မင်းထိုင်နေရာသို့ ခါးလေးညွတ်၍ ငုံ့ကာ ရေစက်ကလေးများကို ပွတ်သပ်ပေးနေသည်ဖြစ်၍ သူမ၏ မျက်နှာလေးမှာ ကိုဇော်မင်း၏ မျက်နှာရှေ့တွင် လေး ငါးလက်မပင် မကွာဝေးတော့ပါ။
ကိုဇော်မင်း၏ အာရုံအတွင်းသို့ မို့မို့ထွန်း ကိုယ်သင်းရနံ့လေးများက လှိုက်မောစွာ ဝင်ရောက်လာ၏။ ပြီးတော့ ရေစက်များ ကျသွားသော ပေါင်ကို ပွတ်ပေးနေသော မို့မို့ထွန်း၏ လက်နုနုလေးများက သူ၏ မာတောင်နေသော လီးကြီးကို မထိတထိလေး ခလုတ္တိုက္ကာ ပွတ်တိုက်ပေးနေ၏။ ကိုဇော်မင်း စိတ်ထဲတွင် ကာမစိတ်များ ဟုန်းခနဲ ထကြွလာပြီး သူနှင့် ငါးလက်မလောက်သာ ဝေးကွာတော့သော မို့မို့ထွန်း၏ မျက်နှာလေးကို ဆြဲယူ၍ ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်၏။
တဆက်တည်း မို့မို့ထွန်း၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ထိုင်လျှက်မှပင် ဆြဲယူ ပွေ့ဖက်လိုက်မိတော့သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ ကိုဇော်မင်း၏ ရင်ခွင်အတွင်းသို့ အလိုက်သင့်ကလေး ကျရောက်သွား၏။ ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ နို့ကလေးကို လှမ်းကိုင်၍ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဖျစ်ညှစ်ပစ်လိုက်သည်။ ဟာ..အစ်ကိုကြီးကလည်းကွာ နေ့ခင်းဘက် အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး.သြား မို့မို့ထွန်းက တိုးညှင်းလှိုက်မောစွာ ပြော၍ ကိုဇော်မင်း ရင်ခွင်ထဲမှ အသာလေး ရုန်းထွက်ကာ မတ်တပ်ပြန်ရပ်လိုက်၏။ မရဲတရဲ လျော့ရဲရဲ ဖက်ထားမှုကြောင့် မို့မို့ထွန်းမှာ အလြယ္တကူ ရုန်းထွက်နိုင်ပြီး ကိုဇော်မင်း၏ ဘေးတွင် မတ်တတ်လေးရပ်ကာ ထိုင်နေသော ကိုဇော်မင်းကို ငုံ့ကြည့်လိုက်၏။
ကိုဇော်မင်းကလည်း သူမကို မော့၍ ကြည့်နေသည်။ အကြည့်ချင်းဆုံ ၊ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြသောအခါ မို့မို့ထွန်းက ကိုဇော်မင်းကို နှစ်နှစ်ကာကာလေး ပြုံးပြလျက် နောက်သို့ ဆတ္ခနဲ လှည့်ပြီး အပြေးလေးတပိုင်းဖြင့် သူမ၏ တင်သားကြီးများ ကို အစွမ်းကုန် ခါရမ်းလျက် သူမတို့ အိပ်ခန်းဆီသို့ ပြေးထွက်သွားတော့၏။ ကိုဇော်မင်းကလည်း ပထမေတာ့ ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှ အသာထ၍ မို့မို့ထွန်း၏ နောက်မှ ဝင်လိုက်သွားတော့သည်။ အိပ်ခန်းထဲသို့ သူတို့နှစ်ဦး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ရောက်သွားသည်။
အရင်ရောက်သွားသူ မို့မို့ထွန်းက သူမ၏ နောက်ဖက် လက်တစ်ကမ်းအကွာသို့ ကိုဇော်မင်း ရောက်လာသည်ကို သိရွိ၍ အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုတင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွင် ရှိသော မှန်တင်ခုံဖက်သို့ သွားရန် ခြေလှမ်းလိုက်စဉ် ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ လက်လေးတစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲထားလိုက်၏။ ပြီးတော့ သူမဘက်သို့ ခြေတစ်လှမ်းတိုးကာ မို့မို့ထွန်းကို သိမ်းကြုံးဖက်၍ သူ၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ဆွဲယူလိုက်၏။ ရင်ခွင်တွင်းသို့ အလိုက်သင့်လေး ရောက်လာသော မို့မို့ထွန်း၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှစ်လွှာကို ငုံ့ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် စုပ်ယူလိုက်၏။
လက်နှစ်ဖက်က မို့မို့ထွန်း ကျောပြင်လေးကို သိုင်းဖက်ထားပြီး ကျောပြင်လေးတလျှောက် စုံဆန်ရွေ့လျားကာ ပွတ်ပေးနေ၏။ နှုတ်ခမ်းနုနုလေးနှစ်လွှာကို စုပ်ယူပြီးနောက် ကိုဇော်မင်းသည် သူ၏ လျှာဖျားလေးဖြင့် မို့မို့ထွန်း၏ နှုတ်ခမ်းသားများကို ရွရွလေး ပွတ်သပ်ယက်ပေး၏။ မို့မို့ထွန်း၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ကိုဇော်မင်း ကျောပြင်သို့ ရောက်ရှိလာကာ သိုင်းဖက်ထား၏။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို စုပ်ယူထားရာမှ ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ အောက်နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးကို ရွှေ့ပြောင်း စုပ်ယူပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို လျှာဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးသည်။
မို့မို့ထွန်းကလည်း ကိုဇော်မင်း၏ အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို ပြန်လည်စုပ်ယူနမ်းကာ သူမ၏ လျှာဖြင့် ပြန်လည် ပွတ်သပ်ပေးသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ကာမဆိပ္မ်ား တက်လျက် သူတို့၏ မျက်လုံးများကိုလည်း မှိတ်ထားကြ၏။ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းလည်း ဖိကပ်လျက်ရှိနေသည်။ အရပ်ချင်းက မတိမ်းမယိမ်းမို့ ကိုဇော်မင်း၏ ရင်ဘတ်သို့ မို့မို့ထွန်း၏ ရင်သားအိအိများက လာရောက်ဖိကပ်နေသည်ကို ခံစားနေရလေသည်။ ကိုဇော်မင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ မာတောင်လျက် မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်အပေါ်ပိုင်းကို သံချောင်းကြီးသဖွယ် လာရောက် ထောက်ဖိမိနေပြီး မို့မို့ထွန်းက နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် သိမ်းကြုံးဖက်ထားသည့်ကြားမှပင် ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးကို ထိုးဖိမိနေသော သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးကို ကော့၍ လီးကြီးနှင့် ပိုထိမိရအောင် ဖိကပ် ကော့ပေးကာနေ၏။
နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံများ ပြင်းထန်လာကြပြီး မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်း စောက်ရည်များ ရွှဲနေအောင် စိုစြတ္လာသလို ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးထိပ်မှာလည်း အရည်လေးတွေ စိုထွက်လာသည်။ မို့မို့ထွန်းက သူမ၏ တင်သားကြီးများကို နောက်သို့အနည်းငယ် ခြာလိုက္ကာ နှစ်ယောက်သား ပေါင်ခွဆုံများကြားသို့ သူမ၏ လက္ကေလးတစ္ဖက္ကို ထိုးသွင်းကာ သူမ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် ကိုဇော်မင်း၏ လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင် ဖျစ်ညှစ်ဆုတ်နယ်ပေး၏။ သူတို့နှစ်ဦး၏ နှုတ်ခမ်းများမှာလည်း ဖိကပ်၍ အပြန်အလှန် စုပ်ယူလျက်ရှိပြီး လျှာချင်းလည်း ပွတ်သပ်လျက် ရှိနေကြသည်။
ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးမှာ သံချောင်းသဖွယ် မာကျောတောင့်သန်လျက် ရှိပြီး လီးကြီးပေါ်တွင်လည်း အဖုအထစ်များသဖွယ် သွေးကြောကြီးများက ဖောင်းကြွလျက် အားရဖွယ် ဖြစ်ကာ ပုဆိုးပေါ်မှ လက်ကလေးဖြင့် ဆုပ်နယ်ပေးနေသော မို့မို့ထွန်းမှာ အရသာ တွေ့နေရသည်။ ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ တင်သားကြီးများကို ဆုတ်နယ်ပေးနေသော သူ၏ လက္တစ္ဖက္ကို နှစ်ယောက်ကြားသို့ ထိုးထည့်ပြီး မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်လေးကို အုပ်၍ ကိုင်လိုက်ကာ ထမီပေါ်မှပင် ပွတ်၍ပေးလိုက်သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ လွန့်ခနဲ တစ်ချက် တွန့်သွားရ၏။
ခဏကြာတော့ ..မို့မို့ထွန်းက နှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်နမ်းနေရာမှ ဆွဲခွာလိုက်ပြီး နောက်သို့ နည်းနည်း ဆုတ္လိုက္ကာ သူမ၏ တစ်ထည်တည်း ဝတ်ထားသော ရင်စေ့လက်ပြတ် ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေးကို ရင်ဘတ်ရှိ နှိပ်စေ့လေးများကို တစ္လုံးစီ ဖြုတ်မနေတော့ဘဲ ရင်ဘတ်အစနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ညာလက်နှစ်ဘက်မှ ကိုင်ဆွဲလျက် တစ်ချက်တည်း ဆွဲဖြုတ်လိုက်ကာ နောက်သို့လှည့်၍ ကိုဇော်မင်းကို ကျောပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ ချောမောလှပသော မျက်နှာလေးမှာ ပန်းဆီရောင်သန်းလျက် နေလေပြီ..။ မို့မို့ထွန်းသည် ရင်ဘတ်ရှိ အင်္ကျီနှိပ်စေ့များကို တစ်ချက်တည်း ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက် ကိုဇော်မင်းကို ကျောပေးရပ်ထားရာက ကုတင်ရှိရာသို့ အင်္ကျီကို ချွတ်လျက် လျှောက်သွားလိုက်သည်။
ကုတင်နား မရောက်ခင် အင်္ကျီကို အပြီးချွတ်လျက် အိပ်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ချခဲ့ကာ ကုတင်ဆီသို့ ဆက်လျှောက်သွားရင်း ကုတင်ဘေးသို့ ရောက်သောအခါ မတ်တတ်ရပ်လျက်ကပင် ကိုဇော်မင်းကို ကျောပေးလျက် သူမ၏ ထမီကို ဆက်၍ ချွတ်ချလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ ဒူးထောက်လျက် တက္လိုက္ကာ ကိုဇော်မင်းရှိရာဖက်သို့ တစောင်းကျောပေး၍ လဲလျောင်းလိုက်သည်။ ကိုဇော်မင်းသည် သူ၏ အင်္ကျီကို ချွတ်၍ အိပ်ခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ချလိုက်ပြီး မို့မို့ထွန်းရှိရာ ကုတင်ဘေးသို့ ချဉ်းကပ် သွားတော့သည်။
ကုတင်ဘေးသို့ ရောက်သောအခါ ကုတင်စောင်းတွင် တင်ပါးလွှဲထိုင်လိုက်ပြီး မို့မို့ထွန်း၏ ကားအယ်နေသော တင်သားကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်ပေးသည်။ ဖင်ကွဲကြောင်းလေးတလျှောက်ကိုလည်း လက်ဝါးစောင်းဖြင့် ဖြဖြေလး လျှောတိုက်ကာ ပွတ်ဆွဲပေးသည်။ ပြီးတော့ ဖင်သားကြီးများကိုလည်း သူလက္ဖဝါး ကြမ်းကြီးများဖြင့် ပွတ်သပ်ဆုတ်နယ်နေသည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ မျက်လုံးလေးများ မှေးစင်းကာ မှိတ်ထားပြီး ပြုသမျှ နုတော့မည့်ဟန်ဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်း၍ ကိုဇော်မင်း၏ ပွတ်သပ်ဆုတ်နယ် ၊ ကိုင်တွယ်ဖြစ်ညှစ်မှုမှန်သမျှကို ထိတွေ့အရသာခံယူရင်း ငြိမ်နေသည်။
ကိုဇော်မင်းက သူ၏ ခေါင်းကို ငုံ့ကာ မို့မို့ထွန်း၏ ဖုထစ်လုံးဝန်း ကားအယ်နေသော ဖင်သားကြီးကို နှာခေါင်းဖြင့် ရှိုက်၍ ရှိုက်၍ နမ်းလိုက်၏။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းများကို ဖင်သားကြီးပေါ်တွင် ဖိကပ္ကာ စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး လျှာလေးဖြင့် မို့မို့ထွန်း၏ အိစက်နေသော တင်သားများကို ယက်ပေး၏။ မို့မို့ထွန်း၏ ဖင်သားကြီးပေါ်တွင် ကြက်သီးဖုလေးများပင် ထသွားသည်။ ခဏကြာတော့မှ ကိုဇော်မင်းသည်သူ၏ ဦးခေါင်းကို ပြန်မတ်လိုက်ပြီး မို့မို့ထွန်းကို အသာလေး ပွေ့ဖက်ကာ ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ သူမ၏ ဝင်းမှည့်နုနယ်သော နို့ကလေးနှစ်လုံးမှာ တစ်ချက် တုန္ခနဲ လှုပ်ခါသွားသည်။
ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ နို့လေးတစ်ဖက်ကို ငုံ၍ စို့လိုက်သည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများကို လျှာဖြင့် ပွတ်သပ် ကလိပေးသည်။ ကျန်နို့တစ်ဖက်ကိုလည်း လက်ဖြင့် ဆုတ်နယ်၍ ဖြဖြေလး ညွစ္ကာ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးနှင့် လက်မတို့ဖြင့် ဆြဲညွစ္ကာ ပွတ်သပ်ကလိသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများမှာ မာတင်း၍ ထောင်မတ်နေကြလေသည်။ ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ နို့တစ်ဖက်ကို စို့ပေးခြင်း၊ တစ္ဖက္ကို လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ်ပေးခြင်းတို့ကို တစ်လှည့်စီ အပြန်အလှန် လုပ်ပေးနေသည်။ အားရအောင် နို့စို့ပြီးသော အခါတွင်မှ ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ ပြားချပ်ဟိုက်နေသော ဝမ်းဗိုက်သားလေးအပေါ်သို့ သူ၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိကပ္ကာ ဝမ်းဗိုက်သားလေးများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိဆွဲခြင်း၊ လျှာဖြင့် ယက်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။
မို့မို့ထွန်း၏ ချက်တွင်းနက်နက်လေးထဲသို့ လျှာလေးထိုးထည့် ကလိပေးသည်။ ထိုမှတဖန် ကိုဇော်မင်းသည် ဖြူဖွေး၍ နုအိနေသော မို့မို့ထွန်း၏ ဆီးခုံလေးပေါ်သို့ သူ၏ နှုတ်ခမ်းများကို ဖိကပ္ကာ နမ်းပေးသည်။ နုအိနေသော မို့မို့ထွန်း၏ ဆီးခုံလေးကို သွားဖြင့် မနာအောင် ဖြဖြေလး ကိုက်ပေးသည်။ လျှာဖြင့်လည်း ဆီးခုံလေးပေါ် ယက်ပေးသည်။ ပက္လက္ကေလး ဖြစ်နေသော မို့မို့ထွန်းမှာ သူမ၏ ပေါင်တံဖြူဖွေးဖွေးကြီးများကို ထောင်လိုက်သည်။ သူမ၏ အာခေါင်များ ၊ နှုတ်ခမ်းများမှာလည်း ခံစားရလွန်းသောကြောင့် ခြောက်သွေ့လာသည်။
သူမ၏ လျှာလေးကို တစ်ချက် တစ္ခ်က္ထုတ္ကာ နှုတ်ခမ်းလေးများကို တံတွေးဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ မို့မို့ထွန်း၏ ဆီးခုံလေးကို လျှာဖြင့် ယက်လိုက်၊ သွားဖြင့် ဖွဖွကိုက်လိုက်လုပ်နေသော ကိုဇော်မင်းမှာ ဆီးခုံလေး၏ နူးညံ့အိထွေးမှုကို ထိတွေ့နေရပြီး ဆီးခုံလေးမှ ရနံ့သင်းသင်းလေးတို့ကြောင့် သူ၏ ကာမစိတ်တို့မှာ အစွမ်းကုန် ထကြွလာကြပြီ ဖြစ်သည်။ မို့မို့ထွန်း၏ အမွှေးနက်နက်လေးများ ပေါက်နေသော ဆီးခုံဖြူဖြူနုနုအိအိလေးကို အားရအောင် နမ်းပေးပြီးနောက် ကိုဇော်မင်းသည် သူ၏ ဦးခေါင်းကို မတ္လိုက္ကာ ထိုင်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ မို့မို့ထွန်းကို အသာလေး ပွေ့ကာ ကုတင်စောင်းသို့ နေရာပြောင်းပေးလိုက်ရာ အထာ သိပြီးသော မို့မို့ထွန်းက သူမ၏ ခြေထောက်များကို ကုတင်အောက်သို့ တွဲလောင်း ခ်၍ အသင့်နေပေးလိုက်တော့သည်။ ကိုဇော်မင်းမှာ ကုတင်အောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဆင်း၍ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး ဖြူဖွေးနေသော မို့မို့ထွန်း၏ ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီးများကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိဆြဲကာ နမ်းပေးသည်။ ပေါင်တွင်းသားလေးများကိုလည်း လျှာဖြင့် ယက်ပေးလိုက်သည်။ ပေါင်တွင်းသားလေးများမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။
ထိုမှတဖန် မို့မို့ထွန်း၏ ကုတင်အောက်သို့ တွဲလောင်းချထားသော ခြေထောက်နှစ်ချောင်းအနက် တစ်ချောင်းကို ဆြဲယူ၍ သူမ၏ ခြေဖမို့လေးများ ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးများပါ မကျန် တစ်ဆက်တည်း နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ ကျန်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုလည်း ထိုနည်းတူပင် ဆြဲယူကာ နမ်းသည်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို တစ်လှည့်စီ နမ်းပေးသည်။ မိမိအိမ်ထောင်ကျခါစက ကိုဇော်မင်း၏ ညီဖြစ်သူ မိမိ ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်းက ယခုကဲ့သို့ သူမ၏ တစ္ကိုယ္လုံးကို နမ်းပေးခဲ့ဘူးသည်။
သို့၇ာတွင် ကျွမ်းကျင်မှု မရွိ၍ ယခုကိုဇော်မင်း နမ်းပေးတာ ခံရတာလောက် အရသာမတွေ့ခဲ့ရပါ..။ ယခု ကိုဇော်မင်းမှာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရှိလှသည့်အပြင် စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် မိမိ၏ တစ္ကိုယ္လုံးကို မက်မက်မောမော နမ်းပေးနေသဖြင့် သူမ တစ္ကိုယ္လုံး ရှိန်းဖိန်းနေပြီး ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထလျက် အရသာရွိလွ ၊ ကောင်းလှသည့်ပြင် စောက်ပတ်လေးထဲကပင် တစစ်စစ်နှင့် ဖြစ်လာနေသည်။ မိမိကို သည်လောက်ကောင်းသည့် အရသာတွေ၊ ခံစားမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ကိုဇော်မင်းကို မို့မို့ ထွန်း ခင်တွယ်လာမိသည်။ ခြေထောက်ဝင်းဝင်းလေးနှစ်ဖက်ကို နမ်းနေပြီး နောက် ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကို ဒူးကွေး၍ ကုတင်စောင်းသို့ ကားကာ မတင်လိုက်သည်..။
သူမ၏ ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်ကို ကုတင်စောင်းတွင် နင်းမိလျက်သား ဖြစ်အောင် ချထားလိုက်သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ ကုတင်စောင်းတွင် ပေါင်နှစ်လုံးကား၍ ထောင်ထားသော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိသွားရတော့သည်။ ကိုဇော်မင်းသည် ကုတင်အောက် ကြမ်းခင်းတွင်ပင် ဒူးထောက်ထိုင်လျှက် ပေါင်ကားထား၍ ပြူးပြူးကြီး ပေါ်နေသော မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်ကြီးကို အေသအခ်ာ စူးစိုက်၍ ကြည့်နေသည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ နံမည်နှင့်လိုက်အောင် သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မို့မောက်ဖောင်းကားလျက်ရှိပြီး ကာမစိတ်များဖြင့် အလိုးခံချင်စိတ်များ ထကြွသောင်းကျန်းလျက် ရှိနေသဖြင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်နှင့် အပေါ်ပိုင်းတို့မှာ တင်းပြောင်ဖောင်းကားကာ နေတော့သည်။
အမွှေးနက်နက်ကလေးများကလည်း ထူထဲစြာ အုံကောင်းကောင်းဖြင့် ပေါက်နေကြပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများမှာ တင်းစေ့နေလျှက်ရှိ၏။ ကာမစိတ်များ မွှန်နေမှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော ကာမရှေ့ပြေး စောက်ရည်လေးများမှာလည်း စောက်ဖုတ်လေး၏ အပြင်သို့ပင် ယိုစိမ့်ထွက်ကာ စောက်ဖုတ်လေး၏ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားနေရာတွင် စိုရွှဲနေပြီး မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်လေးမှာ မက်မောတပ်မက်ဖွယ်လေး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ မက်မောဖွယ် စောက်ဖုတ်လေးဆီသို့ သူ၏ မျက်နှာကို တိုးကပ်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို သူမ၏ ဖင်သားကြီးများအောက်သို့ ထိုးသွင်း၍ ဖင်သားအိအိကြီးများကို ဆုတ်နယ်ပေးလိုက်ရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ အပေါ်သို့ အနည်းငယ် မော့တက်လာ၏။
သူ၏ နှာခေါင်းဖြင့် စောက်ဖုတ်အုံလေး၏ အပေါ်နားသို့ အမွှေးနက်နက်ကလေးများကြားမှာ ထိုးသွင်းကာ တစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။ သူ၏ လွ်ာကို ထုတ္ကာ စောက်ဖုတ်လေး၏ ဘယ်ညာ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခု တင်းတင်းလေးစေ့နေသည့် အကွဲကြောင်းလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖိကပ္ကာ အောက်မှ အပေါ်သို့ ယက်တင်လိုက်သည်။ အို.အ.အ..အအင်း.ကိုကြီး ရယ်.. မို့မို့ထွန်းမှာ မချိမဆန့်လေး ခံစားရင်း ညည်းညူလိုက်သည်။ ကိုဇော်မင်းက စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး တလျှောက် အောက်မှ အပေါ်သို့ လွ်ာကို အပြားလိုက် ဖိကပ်၍ သုံးလေးကြိမ်မျှ ယက်တင်ပေးလိုက်ပြီး မို့မို့ထွန်း၏ ဖင်သားကြီးများအောက်မှ သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆြဲထုတ္ကာ တင်းစေ့နေသည့် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသာလေးဖြဲလိုက်သည်။
မို့မို့ထွန်းမှာ အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ သုံးလကျော်ကျော်သာ ရှိသေး၍ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးအဝရှိ အတွင်းသားလေးများမှာ နီရဲလျှက်ရှိပြီး အပျိုလေးပမာ ဖြစ်လျှက် မန်းကျည်းစေ့လောက် ရှိသော စောက်စေ့နီတာရဲလေးမှာလည်း ငေါက်ခနဲ ပြူးထွက်နေသည်။ စောက်ပတ်ကို ဖြဲလိုက်သဖြင့် ပေါ်လာသော စောက်စေ့နီရဲရဲလေးကို ကိုဇော်မင်းက သူ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဖြင့် ဖိကပ္ကာ စုပ်ယူလိုက်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းမှပင် လျှာဖျားလေးနှင့် ကလိပေး ပွတ်သပ်ပေးသည်။ အ.အ.အမေ့ကျွတ်ကျွတ်.ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်. မို့မို့ထွန်းသည် ဖင်ကြီးကို ကြွကာ ကော့တင်လိုက်ပြီး တစ္ကိုယ္လုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး အံလေးကြိတ်၍ ညည်းညူလိုက်သည်။
ဆက်လက်၍ ကိုဇော်မင်းက ဖြဲထားသော စောက်ပတ်အဝတွင် သူ၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိလျှက် စုပ်လိုက်ပြန်သည်။ မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်မှ ကာမရှေ့ပြေး စောက်ရည်ကြည်လေးများသည် ကိုဇော်မင်း၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ စီးဝင်လာကြရာ ကိုဇော်မင်းက သူ၏ လျှာဖြင့် ခံယူ၍ ဝမ်းတွင်းသို့ စုပ်ယူမျိုချလိုက်သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာလည်း သူမ၏ ဖင်ကြီးကို ကြွကာ သူမ၏ ရင်တွင်း ဟာသွားလျှက် မချိမဆန့် ဝေဒနာကို လူးလှိမ့်ကာ ခံစားနေရသည်။ ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်လေးကို ပိုမို၍ ဖြဲလိုက်ကာ သူ၏ လွ်ာကို စောက်ပတ်လေးအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ကျဉ်းကြပ်နေသည့် စောက်ပတ်လေးအတွင်းရှိ စောက်ပတ်အတွင်းနံရံသားလေးများကို လျှာဖြင့် ယက်၍ လိပ်လိပ်ပြီး ဆြဲယူကာ ယက်ပေးသည်။
အား.ရွီး..ကျွတ်.ဟင့်..ဟင့်. မို့မို့ထွန်းမှာ တစ်ခါဘူးမှ မခံစားခဲ့ဘူးသော ထူးကဲကောင်းလွန်းလှသည့် အရသာကို သူမ၏ ပေါင်တံကြီးနှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန် ကားပြီး ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးလျှက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး ခံစားနေသည်။ ကိုဇော်မင်းနှင့် ယနေ့ မဆုံမီတွင် မိမိ၏ ယောက်ျား ကျော်ကျော်ဝင်းနှင့် ခေါင်းရင်းဘက် အခန်းမှ ဦးတင်ဝင်းတို့၏ အလိုးကို ခံခဲ့ဖူးသော်လည်း သူတို့၏ ယခုကဲ့သို့ စောက်ပတ်ကို ယက်စုပ်ပေးမှုကို မခံစားခဲ့ရဖူးပါ..။
ထို့ပြင် သူမ အပျိုဘဝကပင် ကာမစိတ်များ တစ်ခါတစ်ရံ ဝင်လာပါက ကြားဖူးနားဝရှိသော စောက်ပတ်ယက်ခြင်း ၊ စုတ်ခြင်းတို့ကို အစုပ္ခံ၊ အယက်ခံရန် ဆန္ဒ ရှိခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးကို အယက်ခံ၊ အစုပ်ခံ၇န် တောင့်တခဲ့မိသည်။ ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ပေ..။ ယခု ကိုဇော်မင်းနှင့် က်မွ သူမတောင့်တ မျှော်လင့်ခဲ့ရမှုတို့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝခဲ့ရတော့သည်..။ အား.အမေလး.အီးအီးကျွတ်ကျွတ်.. နှုတ်ခမ်းလေးများမှ ညည်းညူသံလေးများ ဆက်တိုက်ပေါ်လာကာ သူမ၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို မွှေ့ရာခင်းများအား လုံးထွေးဆုတ်ယူထားပြီး ဖင်သားဖြူဖြူကြီးကို ကော့ကာ အီဆိမ့်နေအောင် ခံစားနေရသည်။
ကိုဇော်မင်းကလည်း မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်ဝမှ သူ၏ နှုတ်ခမ်းကို ခွာယူခြင်း မရွိပဲ ကျဉ်းကြပ်နေသော စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းသို့ သူ၏ လျှာကြမ်းကြမ်းကြီးကို တရစပ် ထိုးသွင်းကာ ယက်ပေးနေတော့သည်။ စောစောက သူမ၏ တစ္ကိုယ္လုံးကို ကိုဇော်မင်းက စုပ်ပေးယက်ပေးနေစဉ်ကပင် သူမ၏ ကာမစိတ်များက အပြင်းအထန် ထကြွနေခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ ယခု ကိုဇော်မင်းက သူမ၏ စောက်ပတ်ကို ယက်ပေးနေပြန်သဖြင့် မို့မို့ထွန်းမှာ ပြီးချင်သလိုကြီးပင် ဖြစ်လာသည်။
မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြင့် ကိုဇော်မင်း၏ လွ်ာကို ထိတွေ့ ဖျစ်ညှစ်လာကြသည်။ စောက်ရည်များကလည်း တသွင်သွင် ထွက်ကျနေသည်။ ကိုဇော်မင်းမှာလည်း ခ်စ္စရာ တပ်မက်ဖွယ် ဖြူဖြူချောချော ငယ်ငယ်တောင့်တောင့် ကောင်မလေးကို ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် တစ္ကိုယ္လုံး စိမ်ပြေနပြေ နမ်းပေးခဲ့ရာ ၊ ကာမစိတ်များ အလွန်အမင်းပင် ထကြွလာခဲ့ပြီ..။. ယခု ကောင်မလေး၏ ခ်စ္စရာ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားပါးတရ စုပ်ပေးယက်ပေးနေရ၍ သူ၏ ရမ္မက်ဇောများ ထကြွနိုးကြားလွန်းလာပြီမို့ သူ၏ လီးကြီးကလည်း မချွတ်ရသေးသော ပုဆိုးအတွင်းတွင် တဆတ်ဆတ် ဖြစ်လျှက် လီးကြီးထိပ်တွင်လည်း အရည်များဖြင့် စိုရွှဲနေလေသည်။
ကာမစိတ်များ ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်ကို ပိုမို၍ ဖြဲကာ စောက်ပတ်အတွင်းထဲသို့ ဝင်နိုင်သမျှ ပိုဝင်အောင် လျှာဖြင့် အတင်းထိုးသွင်းကာ ခပ်သွက်သွက်ကလေး ယက်ပေးသည်။ အီး.အင်းကျွတ်ကျွတ်.အအမေ့အိုအိုကောင်းလိုက်တာကိုကြီး ရယ်.ဟင့်..ဟင့်.. ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ခါနီးလာပြီးမို့ မို့မို့ထွန်းသည် ကိုဇော်မင်း၏ ဦးခေါင်းကို သူမ၏ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးဖြင့် ဆြဲညွပ္ကာ သူမ၏ ဖင်ဆုံဖွေးဖွေးကြီးများကို အစွမ်းကုန်ကော့ပင့်လျှက် စောက်ဖုတ် အယက်ခံနေရင်း အံလေးကြိတ်၊ မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးများမှလည်း အဆက်မပြတ် ညည်းညူနေမိတော့သည်။
ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ စောက်စေ့နီတာရဲလေးကို သူ၏ နှာခေါင်းကြီးဖြင့် အောက်မှ ပင့်ကော်၍ ထိုးပေးပြီး လျှာကိုလည်း စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ အတင်းပင် ထိုးသွင်းလျှက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် လေးငါးကြိမ်မျှ ယက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ အအိ.အိုး.အမေလး.လေးအီး..အား..ကိုကြီးရေ..သူမ်ား..ပြီး ပြီး..အင်း..ကောင်းလိုက်တာ..ဟင့်.ဟင့် မို့မို့ထွန်းမှာ သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုဇော်မင်း ခေါင်းကို ညွပ္ကာ အစွမ်းကုန် ကော့ထိုးလျက် သူမ ဖင်ကြီးများ ရှုံ့ကာ ညွစ္ကာ မချိမဆန့် ခံစားရင်း တစ်ချီ ကောင်းကောင်းကြီး ပြီးသွားရတော့သည်။ ခဏေနမွ မို့မို့ထွန်း၏ ဖင်ကြီး အိပ်ရာပေါ်သို့ ပြန်ကျသွားရသည်။
ကိုဇော်မင်းကလည်း သူ့လျှာကို စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ ဖြေးဖြေးဖွဖွလေး ဆက်၍ယက်ပေးနေရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ အဆမတန် ဖောင်းကားကြွတက်နေသော မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးများကို တပြတ်ပြတ် ယက်ပေးနေရင်း စောက်စေ့လေးကိုပါ ဆက်၍ ညင်သာစွာလေး ယက်ပေးနေသည်။ စောစောက မချိမဆန့် ခံစားရင်း တစ်ချီပြီးသွားခဲ့ရသော မို့မို့ထွန်းမှာ ကိုဇော်မင်း၏ အတန်ကြာအောင် စောက်ပတ်ကို ဆက်၍ ယက်ပေးနေမှုကြောင့် ကာမစိတ်များ ပြန်လည် နိုးကြွလာရပြန်သည်။
မို့မို့ထွန်း ကုတင်စောင်းတွင် တင်ကာ ထောင်ပေးထားသော သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်အောက်သို့ ချပေးလိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကိုဇော်မင်းကလည်း စောက်ဖုတ်ယက်နေမှုကို လက်စသတ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်နေရာမှ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်။ ကိုဇော်မင်း မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်နှင့် မို့မို့ထွန်းကလည်း ကုတင်စောင်းတွင်ပင် ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သူမ၏ သွယ်လျသော လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုဇော်မင်း၏ ခါးကို ဆွဲဖက်လိုက်သည်။ ကိုဇော်မင်း၏ ရင်ဘတ်တွင် ခေါင်းလေးမှီကပ်လျက် သူမ၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်ဖြင့် ကိုဇော်မင်း၏ လုံချည်ခါးပုံစကို ဆြဲ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
ကိုဇော်မင်း၏ လုံချည် ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားလျင်ပင် လီးကြီးမှာ ဘြားခနဲ ပေါ်လာသည်။ ကိုဇော်မင်း၏ ခါးကိုဖက်၍ ရင်ဘတ်တွင် ခေါင်းငုံ့ကပ်ထားပြီး အောက်သို့ လှမ်းကြည့်မိလိုက်သော မို့မို့ထွန်းမှာ ရင်ထဲဝယ် ဖိုခနဲ အေးခနဲ ပင် ဖြစ်သွားရသည်..။ မျက်လုံးလေးများမှာလည်း ဝိုင်းလည်သွားရသည်။ ကိုဇော်မင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ အရှည် (၈) လက်မကျော်လောက် ရှိပြီး မဲနက်၍ အကြောများမှာလည်း လီးတန်ကြီး ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖုထစ်ဖောင်းကြွနေကြသည်။ လုံးပတ်ကလည်း သူမလက်ကလေးနှင့် တစ်ကိုင်ပင် မပတ်မိနိုင်ပဲ ကြားတွင် လက်သုံးလုံးခန့် ဟနေသေးသည်..။
အရှည်ရော ၊ လုံးပတ်ပါ သူမခံခဲ့ဖူးသော ယောက်ျားနှစ်ယောက်ထက် သာလွန်လှသည်..။ လီးကြီးထိပ်ရှိ ဒစ်ကြီးမှာလည်း တစ္ခုလုံး နီ၇ဲကာ ပေါ်နေပြီး လီးကြီး၏ အလယ်ပိုင်းလောက်မှစ၍ အပေါ်ဖက်သို့ လေးကိုင်းသဖွယ် ကော့ကွေးတက်နေသည်။ အသည်းယားစဖွယ်၊ တပ်မက်ဖွယ် ကောင်းလှသော လီးတန်ကြီးကို မို့မို့ထွန်းသည် သူမ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးတစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ မို့မို့ထွန်း တစ္ကိုယ္လုံး ရှိန်းဖိန်းသွားကာ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှာလည်း တစစ်စစ်ဖြင့် ယားကြွလာကာ စောက်ရည်များလည်း ထပ်၍ ယိုစိမ့်ကျလာရတော့သည်။
မို့မို့ထွန်းသည် ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်၍ အားရပါးရ တစ်ချက်ဖျစ်ညှစ်လိုက်ပြီး ဖြဖြေလး ပြောင်းကိုင်ကာ လီးကြီးကို အရင်းအဖျား စုံဆန်၍ ပွတ်ပေးသည်။ နီရဲနေသည့် ဒစ်ကြီး၏ ရှေ့ဘက် ထိပ်ဖူးကြီးကိုလည်း သူမ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးထဲ ထည့်ကာ အသာအယာလေး လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကိုင်၍ ပွတ်ပေးနေသည်။ ဒစ်ကြီးကိုလည်း သူမ၏ လက်ခလယ် လက်ချောင်းလေးဖြင့် ဒစ်ကြီးထိပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို ဝေ့ဝိုက်၍ ပွတ်သပ်ပေးသည်။ လီးတန်ကြီးမှာ သံချောင်းကြီးသဖွယ် မာကျောတောင့်သန်၍ တဆတ်ဆတ်ဖြင့် အထက်အောက် လှုပ်ရမ်းနေသည်။
ကိုဇော်မင်းမှာ သူ၏ လီးကြီးကို မို့မို့ထွန်းက သူမ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်ပေးပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နှိုးဆွနေမှုကြောင့် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပူနွေးလာလျှက် ကာမရမ္မက်စိတ်များလည်း မုန်တိုင်းထန်လာပြီး လိုးချင်စိတ်မျာ ထိန်းမရတော့အောင် ဖြစ်လာရတော့သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာလည်း ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးကို အားပါးတရ ကိုင်တွယ်ဆုတ်နယ်ပေးနေရင်း မိမိ၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ အလျှင်အမြန်ပင် ဆွဲသွင်းပစ်လိုက်ချင်စိတ်များ တဖြားဖြား ပေါ်ပေါက်လာနေသည်။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးထဲတွင်လည်း အရည်များ စိုရွှဲနေပြီ ဖြစ်သည်။
မို့မို့ထွန်းသည် ကိုဇော်မင်း၏ လီးကြီးကို ခပ်ဖိဖိလေး ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး ထက်အောက် စုန်ဆန် ပွတ်ပေးကာ လေးငါးချက်မျှ ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လီးကြီးကို အားရပါးရ တစ်ချက်မျှ ဖျစ်ညှစ်ပေးလိုက်ပြီး ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ မတ်တတ်ရပ်ကာ ထလိုက်သည်။ ကိုဇော်မင်းကို ရမ္မက်ထန်သော ၊ ရီဝေဝေ မျက်လုံးလေးဖြင့် တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ကိုဇော်မင်းကို ကျောခိုင်းရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ခါးကို ညြတ္ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ လက်နှစ်ချောင်းကို ထောက်လိုက်သည်။ မို့မို့ထွန်းသည် ကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်တွင် ခြေချလျက် ကုတင်စောင်းတွင် အလိုးခံရန် ကုန်းပေးလိုက်လေသည်။
အရပ် ၅ ပေ ၆လက်မ ခန့် ရှိပြီး အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိသေးသော မို့မို့ထွန်းသည် အ၇ွယ်နှင့်မမျှ အချိုးအစားကျန ဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုင်းကာ ၃၄- ၂၁ ၃၆ အတိုင်းအတာ ရှိသော သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးကို ခါးလေးညွှတ်၍ ခြေနှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ် ကားပြီး ကုတင်စောင်းတွင် လက်ထောက်၍ ကုန်းပေးနေသည်ကို သူမ၏ နောက်မှ ကပ်၍ အနီးကပ်မြင်နေရသော ကိုဇော်မင်းမှာ သူ၏ စိတ်များကို မထိန်းနိုင်တော့ပါ..။ ကားအယ်နေသော တင်ပါးသား ဖြူဖြူအိအိကြီးများကြားမှ အမွှေးနက်နက်လေးများနှင့်အတူ နောက်သို့ စူထွက်နေသည့် မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အရည်များဖြင့် စိုရွှဲကာ တင်းပြောင် စိုအိဝင်းလက်နေသည်။
ကိုဇော်မင်းက မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်အဝတွင် သူ၏ လီးကြီးကို တေ့လျက် သူမ၏ ဖင်သားကြီးများကို ဆုတ်ကိုင်ကာ လီးကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်မျှ ဝင်အောင် လျှောခနဲ လိုးသွင်းလိုက်သည်။ မို့မို့ထွန်းမှာ ခေါင်းကလေးမော့ကာ သူမ၏ ပါးစပ်လေး ဟသွားရသည်။ လီးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်ကိုပဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လေးငါးကြိမ်မျှ လုပ်ပေးပြီးမှ ကိုဇော်မင်းက သူ၏ လီးတန်ကြီးကို အားစိုက္ကာ မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ အဆုံးတိုင် ဖိသွင်း ဆောင့်ချလိုက်တော့သည်။ ဖွတ်..ပြွတ်ပလွတ်.
အား.ပါး..ကျွတ် ကျွတ် မို့မို့ထွန်း စုတ္ကေလး တစ္ခ်က်သပ္ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ထောက်ထားသော သူမ၏ လက္ကို တံတောင်ဆစ်များ ကွေးကာ ပြောင်းထောက်လိုက်ပြီး ခါးကိုလည်း ပို၍ ညွတ်ကုန်းပေးလိုက်သဖြင့် သူမ၏ တင်သားမို့မို့ကြီးများမှာ ပို၍ ကားအယ္ထြက္လာကာ စောက်ပတ်ကြီးမှာလည်း နောက်သို့ ပိုပြီး စူအက်ထွက်လာလေသဖြင့် နောက်မှ လိုးနေသော ကိုဇော်မင်းမှာ ပို၍အားရဖွယ် ဖြစ်လာပြီး မို့မို့ထွန်း၏ ခါးသေးသေးလေးကို ကိုင်၍ အားရစြာ တစ်ချက်ချင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်၍ လိုးတော့သည်။ ဖွတ်.ပလွတ် မို့မို့လေး.ကောင်းရဲ့လား..ဟင်.. အင်း..ဟင်း..ဟင်း..ကောင်းကောင်းတယ်.ကိုကြီးရယ်သိပ်ကောင်းတာပဲ ဖွတ်..ပလွတ်.ပြွတ်. မို့မို့ထွန်းမှာ နောက်မှ ကိုဇော်မင်း၏ လိုးဆောင့်ချက်များနှင့် အညီ သူမ၏ ဖင်သားဖြူဖြူအိအိကြီးများကို နောက်သို့ ကော့၍ ကော့၍ တွန်းဆောင့်ပေးသည်။
သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်းမှာလည်း စောက်ရည်များဖြင့် စိုရွှဲနစ်နေသည်။ ကိုဇော်မင်းက ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း သူမ၏ တင်သားကြီးများမှာ တုန်ခါ၍ သွားရသည်။ ဖွတ်..ပလွတ်..ပြွတ်ဖွတ်.စွပ်. မို့မို့ထွန်းသည် အပျိုစင်လေး မဟုတ်တော့ပါ..။ သို့ရာတွင် အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ ၃ လခန့်သာ ရှိသေး၍ သူမ၏ စောက်ဖုတ်မှာ ကျဉ်းကြပ် စီးပိုင်နေပြီး အပျိုလေးနှင့် မခြားပင် ရှိသေးသည်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးများပင် အညိုရောင် မပြောင်းသေးပေ..။
ထို့ပြင် သူမမွာ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကောင်းကောင်းအလိုးခံနေရသူဖြစ်သည့်အပြင် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း အလိုးခံရသည့်အရသာကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စွဲလမ်းနေမိပြီးဖြစ်၍ စောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် လီးအဝင်မှာ လျှောခနဲ လျှောခနဲဖြင့် ချောမွေ့စွာ ဝင်ထွက်နေအောင်ပင် အလိုးခံမှုအပိုင်း၌လည်း အထာကျွမ်းကျင်ကာ အေပးအခံ ကောင်းလှသည်။ ကိုဇော်မင်းသည် မို့မို့ထွန်း၏ ဖင်သားထစ်ထစ်ကြီးများကို ကိုင်ညှစ်ဆုတ်နယ်လျှက် သူ၏ လီးကော့ကော့ကြီးကို စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ထိထိမိမိ အားစိုက္ကာ တစ္ခ်က်ဆို ဆိုသလောက် အဝင်နက်အောင် ထိုးသွင်းဆောင့်ချပေးနေသည်။
ဖင်သားကြီးများကို ကြည့်ရင်းလိုးရသည်မှာ အမြင်အာရုံ အရသာရှိလှသည့်အပြင် စောက်ခေါင်းလေးကလည်း ကျဉ်းကြပ်စီးပိုင်နေသဖြင့် အရသာတွေ အပြည့်အဝ ခံစားနေရတော့သည်။ ဖွတ်ပလွတ်.ပြွတ်..ပြွတ်.စွပ် ကိုဇော်မင်းသည် သူ၏ လီးတန်ကော့ကော့ကြီးကို ကော်ပင့်၍ လိုးဆောင့်ပေးနေသဖြင့် စောက်ခေါင်းတလျှောက် လီးအသွင်းအထုတ်လုပ်ရာ၌ လီးဒစ်ကြီးနှင့် စောက်ခေါင်းနံရံတို့ ပြည့်ကြပ်စွာ ဖျစ်ညှစ်၍ ဆွဲသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ မို့မို့ထွန်းမှာ ကောင်းလွန်းလှသော အလိုးခံရမှု အရသာကို မျက်စိကလေးမှိတ် အံလေးကြိတ်ကာ ခံစားနေရပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်း အီဆိမ့်စ ပြုလာသည်။
ဖွတ်.ပလွတ်. အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်ကောင်းလှချည်လား ကိုကြီးရယ်ဟင်းဟင်း..၊ ခုနကလို လီးကြီးကို ကော်ကော်ပြီး ဆောင့်ပေးစမ်းပါကောင်းလွန်းလို့ပါ..ကော်ဆောင့်ပေးပါဟင့်ဟင့်. ကိုဇော်မင်းကလည်း မို့မို့ထွန်း၏ ညည်းတွားရင်း တောင်းဆိုမှုအတိုင်း သူ၏ လီးကြီးကို ကော်ကော်ပြီး ဆောင့်ပေးသည်။ မို့မို့ထွန်းသည် ကိုဇော်မင်း၏ အလိုးကို အားပါးတရ အရသာရွိစြာ ကော့ပင်၍ အလိုးခံနေရင်း တွေးမိသည်။
သူမကို လိုးခဲ့ဖူးသော ယောက်ျားများ ဖြစ်သည့် ချစ်လင် ကျော်ကျော်ဝင်း၊ ခေါင်းရင်းဖက် အခန်းမှ ဦးတင်းဝင်းတို့နှင့် အခု မိမိချစ်လင်၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ကိုဇော်မင်းတို့ ယောက်ျား ၃ ဦး၏ လီးမ်ားမွာ ပုံစံ တစ်မျိုးစီ ဖြစ်ကြပြီး လိုးပုံများမှာလည်း တစ်မျိုးစီ ကောင်းလှသည်။ ကိုဇော်မင်းမှာ မို့မို့ထွန်း၏ စောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို အားရစြာ ဆောင့်လိုးနေရပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများမှာလည်း သူ့လီးကြီးကို ရစ်ပတ်ဆွဲစုပ်ယူနေသဖြင့် လီးကြီးအတွင်းပိုင်းမှ တစစ်စစ်ဖြင့် ယားကြွအီစိမ့်လာကာ ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ေ၇ာက်လုနီးပြီး ဖြစ်၍ မို့မို့ထွန်း၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခပ်တင်းတင်း ဆွဲကိုင်ပြီး အားကုန္ထုတ္ကာ ဆောင့်၍လိုးပစ်လိုက်တော့ရာ မကြာခင်မှာပဲ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။
မို့မို့ထွန်းမှာလည်း ကိုဇော်မင်း၏ လီးတန်ကြီးထိပ်မှ သုတ်ရည်များ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် စောက်ခေါင်းတလျှောက် ပန်းသွင်းခံရစဉ်မှာပဲ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ စောက်ရည်များ တပျစ်ပျစ် ညွစ္ထုတ္ခ်လိုက္ကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ရောက်ရှိသွားရတော့သည်။